Marawaxadaha dabaysha: waxa ay tahay, sifooyinka iyo sida ay u shaqayso | Dib -u -cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 01/09/2021 13:54 | Awoodda dabaysha
Tamarta dabayshu waa midda ugu muhiimsan adduunka tamarta la cusboonaysiin karo. Sidaa darteed, waa inaan si fiican u ogaannaa waxa ay ku shaqeyso. The marawaxadaha dabaysha Waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah tamarta noocan ah. Waxay leedahay qalliin si cadaalad ah u dhammaystiran waxaana jira noocyo kala duwan oo marawaxado oo ku xidhan beerta dabaysha ee aan joogno.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato marawaxadda dabaysha, sifooyinkeeda iyo sida ay u shaqayso.
1 Waa maxay marawaxadaha dabaysha
2 Gudaha matoorrada dabaysha
3 Qaybaha marawaxadaha dabaysha
Waa maxay marawaxadaha dabaysha
Marawaxadaha dabaysha waa aalad farsamo oo tamarta dabaysha u beddelaysa tamar koronto. Marawaxadaha dabaysha ayaa la naqshadeeyay si loogu beddelo tamarta kinetik ee dabaysha tamar farsamo, taas oo ah dhaqdhaqaaqa dhidibka. Kadib, matoorka marawaxadaha marawaxadaha, tamarta farsamada ayaa loo rogaa tamar koronto. Korontada soo baxda waxaa lagu kaydin karaa baytari ama si toos ah ayaa loo isticmaali karaa.
Waxaa jira saddex sharci oo aasaasi ah oo fiisigis ah oo xukuma tamarta la heli karo ee dabaysha. Sharciga ugu horreeya wuxuu dhigayaa in tamarta ay marawaxaddu soo saarto ay u dhigantaa afargeeska xawaaraha dabaysha. Sharciga labaad wuxuu sheegayaa in tamarta la heli karo ay u dhigantaa aagga xaaqay ee daabku. Tamarta ayaa u dhiganta afargeeska dhererka daab. Sharciga saddexaad wuxuu dhigayaa in waxtarka ugu badan ee aragtiyeed ee marawaxadaha dabayshu ay tahay 59%.
Si ka duwan kuwii hore ee dabaylaha dabaysha ee Castilla La Mancha ama Nederland, dabaylahaas dabayshu waxay dabada u riixaysaa baalasha si ay u wareegto, marawaxadaha dabaysha ee casriga ahi waxay adeegsadaan mabaadi'da aerodynamic oo aad u adag si ay u qabsadaan tamarta dabaysha si hufan. Dhab ahaantii, sababta ay marawaxadda dabayshu u dhaqaajiso baalasheeda waxay la mid tahay sababta ay diyaaraddu hawada ugu sii jirto, waxaana sabab u ah muuqaal jireed.
Marawaxadaha dabaysha, laba nooc oo ah xoogagga aerodynamic ayaa laga soo saaraa garbaha rotor: mid waxaa lagu magacaabaa riixid, taas oo u dhiganta jihada socodka dabaysha, tan kalena waxaa la yiraahdaa jiid, taas oo barbar socota jihada socodka dabaysha hawada.
Naqshadaynta garbaha marawaxadaha ayaa aad ugu eg tan baalka diyaaradda waxayna u dhaqantaa sida tan dambe ee xaaladaha dabaysha leh. Garabka diyaaradda, hal dusha ayaa aad u wareegsan, halka kan kalena uu yahay mid fidsan. Marka hawadu ku dhex wareegto baalasha dhagaxa ee naqshadan, socodka hawada ee siman siman ayaa ka gaabinaysa socodka hawada ee dusha wareega. Farqiga xawaarahaan markiisa wuxuu soo saari doonaa farqiga cadaadiska, kaas oo ka fiican dusha siman marka loo eego dusha wareega.
Natiijada kama dambaysta ahi waa xoog ku shaqeeya dusha siman ee baalasha duufaanta. Ifafaalahan waxaa loogu yeeraa "saamaynta Venturi", taas oo qayb ka ah sababta ifafaalaha "qaadista", taas oo markeeda, waxay sharxaysaa sababta ay diyaaradu hawada ugu sii jirto.
Gudaha matoorrada dabaysha
Garbaha marawaxadaha dabaysha ayaa sidoo kale adeegsada farsamooyinkan si ay u keenaan dhaqdhaqaaq wareeg ah oo ku wareegsan dhidibkooda. Naqshadaynta qaybta daabku waxay sahlaysaa wareegga sida ugu habboon. Gudaha koronto -dhaliyaha, habka beddelidda tamarta wareegga ee mindida loo beddelo tamar koronto ayaa dhacda by sharciga Faraday. Waa inay ku jirtaa rotor -ka oo ku wareegaya saamaynta dabaysha, oo ay weheliso beddel -beddel, oo u beddelaa tamarta farsamo ee wareegaysa tamar koronto.
Qaybaha marawaxadaha dabaysha
Hawlaha ay hirgeliso cunsur kasta waa kuwan soo socda:
Wareeg: Waxay ururisaa tamarta dabaysha waxayna u beddeshaa tamar farsamo oo wareegaysa. Xataa xaaladaha xawaaraha dabaysha oo aad u hooseeya, naqshadiisu waxay muhiim u tahay leexashada. Waxaa laga arki karaa dhibicdii hore in naqshadda qaybta daabku ay fure u tahay hubinta wareegga rotor.
Ku xirnaanta marawaxadaha ama nidaamka taageerada: waafajinta dhaqdhaqaaqa wareegga ee daabku si uu u wareego wareegga rotor -dhaliyaha kaas oo ay ku lammaan tahay.
Fidiyaha ama sanduuqa Xawaaraha dabaysha caadiga ah (inta u dhaxaysa 20-100 km / h), xawaaraha rotor-ku wuu hooseeyaa, qiyaastii 10-40 wareeg daqiiqaddii (rpm); Si loo dhaliyo koronto, rotor -ka koronto -dhaliyaha waa inuu ku shaqeeyaa 1.500 rpm, sidaa darteed nacelle waa inay ku jirtaa nidaam ka beddelaya xawaaraha qiimihii hore una gudbaya qiimaha ugu dambeeya. Tan waxaa lagu dhammaystiraa farsamo la mid ah sanduuqa gaaska ee mashiinka baabuurka, kaas oo adeegsada jaangooyooyin badan si uu ugu beddelo qaybta dhaqaaqaysa ee koronto -dhaliyaha xawaare ku habboon dhalinta korontada. Waxa kale oo ku jira biriiga si loo joojiyo wareegga rotor-ka marka dabayshu aad u xoog badan tahay (in ka badan 80-90 km / h), taas oo dhaawici karta qayb kasta oo ka mid ah koronto-dhaliyaha.
Soo -saare: Waa urur rotor-stator oo dhaliya tamar koronto, kaas oo loo gudbiyo saldhigga iyada oo loo marayo fiilooyin lagu rakibay munaaradda taageerta nacelle, ka dibna lagu quudiyo shabakadda. Awoodda koronto -dhaliyaha ayaa ku kala duwan inta u dhaxaysa 5 kW ee marawaxadaha dhexdhexaadka ah iyo 5 MW ee marawaxadda ugu weyn, inkasta oo ay hore u jireen 10 MW marawaxadaha.
Matoorka jihaynta: Waxay u oggolaanaysaa qaybaha inay wareegaan si ay u meeleeyaan nacelle jihada dabaysha jirta.
Mastarka taageerada: Waa taageerada qaabdhismeedka koronto -dhaliyaha. Awoodda marawaxadaha oo sii weynaata, dhererka baalasha ayaa sii weynaanaya, sidaas darteedna, waxaa sii weynaanaya dhererka ay qasab tahay in nacelle ku yaallo. Tani waxay ku daraysaa kakanaanta dheeraadka ah nashqadda munaaradda, oo ay tahay inay taageerto culeyska set -dhaliyaha. Sidoo kale daabku waa inuu lahaadaa qaab dhismeed sare oo u adkaysan kara dabaylaha sare oo aan jabin.
Paddles iyo anemometer: aaladaha ku yaal gadaasha gondolada oo ay ku jiraan koronto -dhaliyayaal; waxay go'aamiyaan jihada waxayna cabbiraan xawaaraha dabaysha, waxayna ku dhaqmaan garbaha si ay u jebiyaan marka xawaaraha dabayshu ka badan tahay marinka. Xadkan ka sarreeya, waxaa jira halis dhismeed oo marawaxadda. Kani inta badan waa nashqad nooc marawaxado ah.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto marawaxadda dabaysha iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Awoodda dabaysha » Marawaxadaha dabaysha
Dhagaxyada iyo macdanta
Tamarta Nukliyeerka: faa'iidooyinka iyo khasaaraha